China Twist fandavahana, fantsona fandavahana vy tsy misy fangarony, vy fandavahana vy, fantsom-pitrandrahana vy, fantsom-pitrandrahana HSS, famokarana loaka hazo sy mpanamboatra | Boda
Fitrandrahana miolakolaka, fantsom-pitrandrahana vy tsy misy fangarony, fantsom-pitrandrahana vy, fitrandrahana vy, fitrandrahana HSS, tsofa loaka
Vokatra: Boribory feno fikororohana feno
Ny fandavahana mihodina matetika eny an-tsena dia vita amin'ny vy haingana (fotsy) sy karbida simenitra (mainty maivana).
Ny vy haingam-pandeha dia tsy dia misy hamafiny, saingy henjana sy ambany ny vidiny, saingy tsy azo ampiasaina amin'ny fanapahana haingam-pandeha. Ampiasaina amin'ny ankapobeny ho an'ny fitaovana misy hamafiny ambany, toy ny firaka aliminioma, vy vy ambany, sns;
Ny karbida simenitra dia misy hamafiny avo lenta, tsy dia henjana sy vidiny lafo. Azo ampiasaina amin'ny fanapahana haingam-pandeha izy io. Matetika izy io dia ampiasaina amin'ny fitaovana manana hamafin'ny hafanana, toy ny vy vita amin'ny firaka sy vy vy avo lenta aorian'ny fanaovana annealing.
BOSENDA Boribory feno fikororohana boribory / metaly fandavahana metaly misy fenitra indostrialy, miangavy amin'ny vy tsy misy fangarony, vy vy, vy vy, fantsom-boaloboka, firaka aliminioma ary fitaovana vy hafa. Ahitana vy avo lenta haingam-pandeha avo lenta, fitsaboana hafanana banga, maranitra ary mateza.
Ny fitaovana HSS sy karbida simenitra dia azo ampiasaina amin'ny vy tsy misy fangarony, vy vy, vy zoro, varahina sy aliminioma ary metaly hafa. Mikosoka tanteraka izy io, miaraka amin'ny lelany maranitra ary mitazona fanoherana avo lenta ary manana androm-piainana lava kokoa izy io. Ny shank mahitsy dia mety amin'ny fandavahana tanana elektrika sy ny lefitry ny dabilio.
Ny boriborin'ny boribory misy fitaovana HSS samihafa ary avy amin'ny fitaovana matevina dia azo ampiasaina amin'ny fitaovana metaly isan-karazany miaraka amin'ny fiainam-panompoany samy hafa. ary kalitao azo antoka.
Misafidy ny paikady fampihenam-bidy mety indrindra ho anao izahay araka ny zavatra fandavahana, manome ny vokatra matihanina indrindra izahay. Tao anatin'izay 10 taona lasa izay, dia nalefanay ny ankamaroan'ny kaontinanta izay misy firenena maro manerana an'izao tontolo izao, ny kalitaonay dia eo afovoan'ny raharaham-barotra ataontsika ary hohamafisinay hatrany ny fanamafisana ny fifehezana kalitao sy ny serivisy aorian'ny fivarotana mba hijanonana eo amin'ny sehatry ny fifaninanana.
BOSENDA Twist Drill Bits dia manome famaritana feno, manome fahafaham-po ny fandavahana ireo karazana metaly rehetra.
Previous: Kitapom-bokatra, paompy Groove Chip, paompy mahitsy mahitsy, paompy milina fitotoana feno, koba M35
Manaraka: Kitapom-baravarana vita amin'ny hazo, hazo mavesatra, mpikapa hazo, hazo sakana